Shahaadada Helitaanka ee Ganacsatada Gaadiidka Dadweynaha ee Gaarka ah | RayHaber | raillynews
HometareenkaShahaadada Helitaanka Gaadiidka Dadweynaha Gaarka ah
31 / 10 / 2017 tareenka, GUUD, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
Arifiye iyo Sapanca Basaska Dadweynaha ee Gaarka loo leeyahay, ee gawaaridooda ka dhigaya mid ku habboon muwaadiniinta naafada ah, waxaa la siiyay Qeybta Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaaladda. Pistil, “Waxaan kuugu mahadnaqayaa xasaasiyaddan iyo dareenka ay muujiyeen ganacsadeheenna”.
Waaxda Gaadiidka Dawladaha Hoose ee Magaalada Sakarya ee Arifiye iyo Sapanca Basaska Gaarka ah ee Dadweynaha, taas oo ka dhigaysa baabuurta ku habboon shahaadada marin-u-helidda muwaadiniinta naafada ah. Markii la soo bandhigayay dokumentiga, Fatih Pistil, Madaxa Waaxda Gaadiidka, Davut Yüce, Madaxa Waaxda Adeegyada Bulshada, Mutlu Işıksu, Agaasimaha Gobolka ee Siyaasadaha Qoyska iyo Bulshada iyo milkiilayaasha gawaarida ayaa ka qeyb qaatay.
Waxay qaateen waraaqoodii
Fatih Pistil, Madaxa Waaxda Gaadiidka, ayaa yiri: yapılan Sapanca iyo Gawaarida Gaarka loo leeyahay ee Gawaarida Gaarka loo leeyahay ee lagu kormeerayo baaxadda Awoodaha Korjoogteynta iyo Kormeerka gawaarida gaadiidka dadweynaha ayaa lasiiyay Shahaadada Helitaanka. Waxaan u soo bandhignay dukumintiga ganacsatadayada. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo farsamayaqaanadeena dhankooda xasaasiga ah. ”
Thanks to dareenka iyo dareenka
Fatih Pistil wuxuu yidhi, Özel Basaskeenna Gaarka ah ee Dadweynaha, oo bixiya adeegyada gaadiidka dadweynaha, waxay gaadiidkooda ula qabsadeen muwaadiniinta naafada ah illaa xad aad u badan. Qaab-dhismeedkan dhexdiisa, guddiga kormeerka ee ay dhistay Maamulka ayaa shaqeynaya. Gawaarida aan la siin karin cunaqabateyn ayaa lagu soo rogaa sida uu farayo sharciga. Farshaxanadayaasha Arifiye iyo Sapanca Gawaarida Gaarka ah ee Dadweynaha ayaa naafada siiyay. Waxaan soo bandhignay waraaqahaaga. Waxaan had iyo jeer tixgelin siinaynaa walaalaheena curyaanka ah iyo gabdhaheena tixgalin ku leh howshayada magaaladeena. In deegaanka this waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu daran waxbarashada iyo mashaariic ogaaday in Turkey. Waxaan jecelahay inaan uga mahadceliyo xasaasiyaddan iyo dareenka ay muujiyeen ganacsatada basaska gaarka loo leeyahay ”.
Hay'adda 2 ayaa la siiyay Shahaadada Aqoonsiga ee Karabük
Gaadiidka ku habboon ee Isticmaalka Naafada waxay xaq u leeyihiin Shahaadada Helitaanka
Gaadiidka dadweynaha ee Sakaryada waa war wanaagsan
Warka Wanaagsan ee loogu talagalay Safaaradaha Dadweynaha ee Sakariya